सीपीएलको ड्राफ्ट आज, एक करोडमा बिक्लान् त सन्दीप? » बुद्ध भूमि नेपाल
सेल्फी लिन खोज्दा खोचमा खसेर महिलाको मृत्यु
डाइभर्सनमार्फत पानी हालि, मेलम्ची सुरुङको परीक्षण सुरू
नेपालमा कोरोना संक्रमण बाट थप एक जनाको मृत्यु
Home/खेलकुद/सीपीएलको ड्राफ्ट आज, एक करोडमा बिक्लान् त सन्दीप?
एजेन्सी: क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) टी–२० क्रिकेटको ड्राफ्ट बुधबार हुँदैछ। सन् २०२० सिजनका लागि खेलाडी ड्राफ्ट बुधबार हुने भएको हो।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण हुने भर्चुअल ड्राफ्ट हुँदैछ। जसमा ५ सय ३७ खेलाडी सहभागी हुनेछन्। सिपिएल अगस्ट १८ देखि सेप्टेम्बर १० सम्म ट्रीनिडाड एन्ड टोबेगोमा बन्द रंगशालामा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, यसका लागि सरकारको स्वीकृति आउन भने बाँकी छ।
ड्राफ्टमा पाकिस्तानी अलराउन्डर शहिद अफ्रिदी सर्वाधिक मूल्यमा तोकिएका छन्। उनको नाम अधिकतम रकम १ लाख ६० हजार डलर छ। इंग्ल्याण्डका कप्तान ओइन मोर्गनले १ लाख ३० हजार डलर रकम तोकेका छन्। न्युजिल्यान्डका टिम साउथी र अष्ट्रेलियाका बेन कटिङले १ लाख १० हजार डलर तोकेका छन्।
नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आफ्नो नाम ९० हजार अमेरिकी डलरको (१ करोड ८ लाख नेपाली रुपैयाँ) सूचिमा राखेका छन्। अघिल्लो सिजन सीपीएल खेल्दा ६० हजार अमेिरकी डलर पाएका सन्दीपले यसपटक आफ्नो मूल्य एक करोड राखेका हुन्।
उनीसँगै यस रकम सूचिमा दक्षिण अफ्रीकाका फाफ डु प्लेसिस र डेविड मिलर, अष्ट्रेलियाका डार्सी सर्ट तथा अफगानिस्तानका मोहमद नाबी र मुजिब उर रहमान रहेका छन्। सीपीएलमा ६ टोली रहेका छन्।
प्रतियोगिताका लागि केही विदेशी खेलाडी यसअघि नै विभिन्न टिममा अनुबन्ध भइसकेका छन्। जसमा रासिद खान, क्रिस लिन, राइली रुसोलाई टिमले किनिसकेका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण यसपटक सीपीएलले अघिल्लो सिजनको तुलनामा खेलाडीको रकममा ३० प्रतिशत कटौती गरेको बताइएको छ। एक लाख ३० हजारदेखि एक लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्य राखिएका खेलाडीले पाउने रकम कम हुने भएको छ।
गेलले सीपीएल क्रिकेट नखेल्ने
वेष्ट इण्डिजका विस्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेलले क्यारेवियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) क्रिकेट नखेल्ने भएका छन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै टिमबाट नाम फिर्ता लिएका हुन्।
एसटी लुसिया जौंसमा आवद्ध गेलले यो संस्करण आफू सहभागी नहुने भन्दै टिमलाई काटेका छन्। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीकाबीच यो वर्षको सीपीएल अगस्ट १८ देखि सेप्टेम्बर १० सम्म त्रिनिडाड र टोबगोमा गर्ने तय भएको छ।
गेलले सोमबार आफ्नो टोलीलाई इमेल गर्दै नाम फिर्ता लिन चाहेको र नखेल्ने बताएको क्रिकइन्फोमा खबर छ। उनले अफ्नो निर्णय भन्दै नाम फिर्ता लिन चाहेको बताए। पारिवारीक कारण देखाउँदै गेलले नाम फिर्ता लिएको समाचारमा जनाइएको छ।
उनले एउटा मेल गर्दै फ्रेन्चाईज टोलीलाई परिवारको न्यस्रो लागेको र परिवारको नयाँ सदस्य तथा सानो बच्चालाई भेट्ने ईच्छा भएको कारण खेल्न नसक्ने बताए।
४० वर्षीय गेल टी–२० का सर्वाधिक रनकर्ता समेत हुन्। तर पछिल्ला केही वर्ष उनको प्रदर्शन एकनास छैन। पछिल्लो संस्करणको सीपीएलमा उनले १० खेलमा १ सतकसहित २ सय ४३ रन बनाएका थिए। २०१९ पछि उनले वेष्टइण्डिजका लागि खेलेका छैनन्।